Home » Akụkọ ụgbọ elu » Enweghị Atụmatụ Mberede: ATCEUC weputara Snapshot na Njikwa Ikuku Ikuku na Europe
Atụpụla nwa ọhụrụ na mmiri ịsa ahụ́! ”
Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ụgbọelu na-ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ụgbọelu na European Union Union Coordination (ATCEUC) Onye isi ala Volker Dick na - ekwu okwu
Na 23 Maachị 2021 EUROCONTROL weputara Data Snapshot yana nyocha nke mbido nke ego ATM na Europe kemgbe 1998. Iji data ndị ahụ ATCEUC na-enye echiche ya elere anya na nyocha EUROCONTROL.
Kemgbe oge opupu ihe ubi nke 2020, ọrịa na-efe efe nke COVID-19 enweela mmetụta dị egwu na mpaghara ụgbọelu niile na-egosi na ọ nweghị ndị ọ bụla metụtara ya hụtụrụla ihe ndị a ma ọ bụ nwee atụmatụ mberede iji dozie nsogbu usoro dị ka nke a.
Ya mere, na ngwụsị na nzaghachi nke otu, na Nọvemba (ọnwa asatọ ka mbibi nke ọrịa ahụ na ọdịda nke ụgbọ elu) European Commission nyere Iwu IR 2020/1627 nke na-achọ iji belata mmetụta nke ọrịa a, mana ndị ọrụ ikuku naanị.
Ugbu a EC na-anwa ịmanye ndị Amerịka ịmanye iwu ad-hoc nke PRB nyere, mana ọnụọgụ ha na-atụ aro, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ ọnụ ahịa, ndị otu na-ekwenyeghị na ndị otu Union na-emezigharị. netwọk ATM maka oge ntinye aka nke atọ (2020-2024) ugbu a na-arịọ arịrịọ.
Ọ bụ ezie na ndapụta okporo ụzọ dị ike ma ATCEUC kwenyere n'ụkpụrụ ahụ na ndị ọrụ ikuku agaghị ahapụ naanị ha na-ata ahụhụ naanị (ma ha enweghị…), a gaghị eji nsogbu a mee ihe iji gosi na ị ga-etinye usoro ego na-enweghị atụ na ANSP ziri ezi na oge dị oke mkpa mgbe ha kacha mkpa itinye ego na teknụzụ ọhụụ iji dịrị njikere maka mgbake.